ပြည်သူတွေ သတိရှိဖို့ လိုပါတယ်။ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ကိုမြအေး- “ကုလားဆိုတဲ့စကားကို လုံးဝလက်မခံဘူးဗျာ”
ဦးဇင်း ဝီရသူရဲ့ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး လှုံ့ဆော်ရေးတရား »
ကြံ့ဖွတ်ပါတီကလည်း 15 အတွက် အကွက်သစ်တွေ ထပ်ပြီး ဖန်တီးဖို့ ကြံနေပါတယ်။ နိုင်ငံရေး သားကောင်မဖြစ်ဖို့ ပြည်သူတွေ သတိရှိဖို့လိုပါတယ်။
ဖယောင်းတိုင်မီးနဲ့ ရှို့မှာကြောက်လို့၊ ရခိုင်ကို ဖျက်စီးလိုက်တယ်။ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ အများကြီးသေပြီး၊ သိန်းနဲ့ချီတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ ထပ်ပြီး ထွက်လာတယ်။
လက်ပန်းတောင်းကို အာရုံလွှဲဖို့ ကချင်ကို ဖျက်စီးလိုက်တယ်။ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေ အများကြီးသေပြီး၊ သိန်းနဲ့ချီတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ ထပ်ပြီး ထွက်လာတယ်။
ကချင်ကို စစ်ရပ်တော့ လက်ပန်းတောင်းတောင် အစီအရင်ခံစာအတွက် ထူပူလာပြန်တယ်။ အဲဒီတော့ ရန်ကုန်ကို ဖျက်ပြီး၊ နေပြည်တော်ကိုပဲ မြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်ပလိုက်ချင်တဲ့ စစ်ခွေးတွေ ရန်ကုန်ကို မီးလောင်တိုက်သွင်းဖို့ ရခီးတွေကို ‘ဟ’ပေးထားတယ်။
ကျနော်တို့ မွတ်စလင်မ်တွေကတော့ သည်းခံနိုင်စွမ်း အရမ်း ကြီးမားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သည်းခံခြင်းဟာလည်း အတိုင်းအတာရှိတယ်ဆိုတာလည်း မမေ့ထားသင့်ပါဘူး။
အစ္စလာမ်က သည်းခံဖို့ပဲ သွန်သင်ထားပါတယ်။
ရခိုင်မှာလို လွယ်လွယ်လေး ချေလို့ရမယ်လို့တော့ သွေးနထင် မရောက်လိုက်နဲ့။ မှားသွားလိမ့်မယ်။ မွတ်စလင်မ်ဆိုတာ ဒီပြင့် အုပ်စုတွေနဲ့ မတူပါ။ ကမ္ဘာ့အရှေ့ဖျားက မွတ်စလင်မ်တစ်ယောက် အတိဒုက္ခရောက်ရင် ကမ္ဘာ့အနောက်ဖျားက မွတ်စလင်မ်တစ်ယောက်ရဲ့ အသည်းနှလုံးတွေက တစ်ဆတ်ဆတ်တုန်လာတယ်။ ဒါကို ‘ပုံပြင်’လို့တော့ မမှတ်လိုက်ပါနဲ့။
ရခိုင်မှာ အပြစ်မဲ့မွတ်စလင်မ်တွေ အသက်ခံရတုန်းက မြင်လိုက်ကြတယ် မဟုတ်လား။ တူရကီဝန်ကြီးချုပ် ကတော်က သာမာန် မွတ်စလင်မ်အမျိုးသမီးတွေကို နွေးနွေးထွေးထွေး ပွေ့ဖက်ပြီးတော့ မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင် ကျခဲ့တာ။ ငိုကြွေးခဲ့တာ။
ကချင်မှာ အပြစ်မဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေ အသတ်ခံရလို့ မည်သည့် ခရစ်ယာန်နိုင်ငံရဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်က လာပြီးတော့ အဲဒီလို ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကို နွေးနွေးထွေးထွေး ပွေ့ဖက်ပြီး ငိုခဲ့ဖူးလား။
ဒါပဲ ကျုပ်တို့ ပြောတဲ့ အီမာန် သက်ဝင်ယုံကြည်မှုဆိုတာ။ နိုင်ငံရေးမပါဘူး။ ဟန်ဆောင်မှု မပါဘူး။ ဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ မွတ်စလင်မ်တစ်ဦးက နောက်တစ်ဦးကို ချစ်မြတ်နိုးကြတာ။ ဖြူ-မဲခွဲတာ မရှိဘူး။ ဇာတ်မြင့်-ဇာတ်နိမ့် မရှိဘူး။ ကျား-မ ခွဲခြားခြင်း မရှိဘူး။ မျိုးနွယ်စွဲ၊ အုပ်စုစွဲ အရမ်းကင်းတယ်။ သမိုင်းစွဲ ရှင်းတယ်။ ဒါကြောင့် ကျုပ်တို့ရဲ့ အီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်မှုက ဘာနဲ့မှ နှိုင်းယှဉ်ပြလို့ မရဘူး။
လက်နက်ကိုင်တပ်ရှိတယ်ဆိုပြီး သွေးနထင်တော့ မရောက်လိုက်နဲ့။
အပြစ်မဲ့လူသားတွေရဲ့ အသက်ကို ထပ်ပြီး သတ်မယ်လို့တော့ စိတ်မကူးနဲ့။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် အောက်တိုဘာလတုန်းက ရခိုင်မှာ ဒုတိယလှိုင်းထပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက ကြိုတင်အကြောင်းမကြားပဲ၊ ဗီဇာမယူပဲ တူရကီစစ်လေယာဉ်တွေ ရောက်လာတာ မှတ်မိတယ် မဟုတ်လား။ အဲဒီလောက်ပဲ ပြောမယ်။ ဒီအတိုင်းလာတာပါ။ ပစ္စည်းလာပို့တာပါလို့တော့ ရူးသလိုလို၊ ကြောင်သလိုလို၊ အတိတ်မေ့သလိုလို ရွှေပျောက်သလိုလို စကားတွေ လိုက်မပြောနဲ့။ ပစ္စည်းပို့ဖို့ ဒီလောက် လောစရာအကြောင်း ဘာမှ မရှိဘူးဆိုတာ အသိဉာဏ်မှန်သူတိုင်း စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ရင် သိနိုင်တာပဲ။
မွတ်စလင်မ်ကိုထိရင် မွတ်စလင်မ်အနောက်မှာ သန်းပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်တဲ့ မွတ်စလင်မ်လူထုကြီးရှိတယ်။
ကိုယ့်ကိုထိရင် ဘယ်သူ ရှိသလဲဆိုတာ သေသေချာချာ ပြန်စဉ်းစား။ ထိုင်းလား။ ကမ္ဘောဒီးယားလား။ လာအိုလား။ စရီလန်ကာ (Sri Lanka) လား။ နီပေါလား။ နာဂစ်တုန်းက အဲဒီတိုင်းပြည်က ၀န်ကြီးချုပ်ကတော်အဆင့်၊ ၀န်ကြီးချုပ်အဆင့် လာပြီးတော့ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်မို့လို့ဆိုပြီး နွေးထွေးဖက်ပြီးတော့ ငိုကြွေးဖူးလား။ ထိုင်းဟာ ကမ္ဘာမှာ ဘာနိုင်ငံလည်းဆိုတာ နိုင်ငံခြား ဗဟုသုတရှိတဲ့ ကလေးတောင် သိတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံ လာကူမှာလဲ။ ရခိုင်အရေးတုန်းက လူမျိုးရေးနဲ့ ဘာသာရေး ကွဲကွဲပြားပြား ခွဲခြားလို့ မရခဲ့လို့ မွတ်စလင်မ်ကမ္ဘာက နည်းနည်းလေးပဲ လှုပ်ခဲ့တာ။ အင်ဒိုဝန်ကြီးချုပ်က ဘာသာရေး မဟုတ်ရပါဘူးလို့ ခဏ၊ ခဏ ပြောပေးနေခဲ့တာ အလကား မအောက်မေ့နဲ့။
ဘာသာရေး အစွန်းရောက်၊ လူမျိုးရေးအစွန်းရောက် မော့ဂ်ရခိုင်တွေကို ဘာသာတူလို့ဆိုပြီး၊ ရခီးဖက်လိုက် မိုက်ဖက်ပါတော့ မလုပ်နဲ့။ ရခီးတွေနဲ့အတူတူ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မျက်နှာထားစရာမရှိ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ဗမာပြည်မှာ မွတ်စလင်မ်တွေ ရှိခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းထောင်ချီနေပြီ။ အခု သောက်ရူးထပြီး၊ အားလုံးကို သတ်ပြစ်ဖို့၊ အားလုံးကို မောင်းထုတ်ဖို့ လုပ်မယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်၊ မဖြစ်နိုင် စဉ်းစားကြည့်။ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ထင်နေရင် စိတ်ဆရာဝန်နဲ့ သွားတွေ့ပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ မွတ်စလင်မ်ဆိုတာ ဗမာပြည်မှာ ဟိုးရှေးပဝေသဏီထဲက ရှိခဲ့တယ်။ အခုလည်း ရှိနေတယ်။ အင်ရှာအလ္လာဟ် နောင်ကိုလည်း ကိယာမသ် ကမ္ဘာပျက်တဲ့နေ့အထိ ရှိနေမှာပဲဆိုတာ အသိရှိဖို့ သတိပေးလိုက်မယ်။ မြန်မာပြည်သူတစ်ရပ်လုံး စစ်ခွေးတွေနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါးစေ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်၊ လူမျိုးရေး အစွန်းရောက်များရဲ့ လှည့်ပတ်ဖျားယောင်းသွေးဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကနေ လွတ်ကင်းကြပြီး၊ ဗမာပြည်နဲ့ ဗမာပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး ကိုယ်၊ စိတ်၊ ၀ိညာဉ်သုံးပါးစလုံး အေးချမ်းကြပါစေ။ အာမီးန်။
Tags: Asia, Bangladesh, Burma, Colombo, Rohingya, Rohingya people, Sri Lanka
This entry was posted on February 22, 2013 at 12:17 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.